Ko Bitcoin imwe Project of US Intelligence ? - Blockchain News
Ndira 19, 2018 arun
The nemaonero kubva Natalya Kaspersky: Bitcoin ari Project of US Intelligence
InfoWatch kuti vakawanda mutungamiriri uye Kaspersky Lab raMwari co-muvambi, Natalya Kaspersky, vachitaura panguva ITMO St.Petersburg National Research University of Information Technologies, Hurongwa uye optics musi waJanuary 18 ainzi bitcoin kukura US utikitivha. Kasperskaya akataura payunivhesiti sezvo chikamu hwomukova mhemberero yacho ITMO-InfoWatch inodzidzisirwa. mharidzo yake chakatsaurwa kuti ruzivo hondo uye digitaalinen uchangamire.
“Bitcoin ndiye kukura American utikitivha nechinangwa kukurumidza nemari utikitivha muUnited States, Britain uye Canada munyika dzakasiyana-siyana. “Privatized”, kufanana Internet, GPS, gate. Saizvozvo – ari “dhora 2.0″. The kudzora Gengi riri mumaoko varidzi exchanges.” – kubva mharidzo Natalia Kaspersky
Kubva Facebook Natalya Kaspersky 19 Ndira 2018
Nhasi ndakagamuchira vazhinji zvikumbiro kubva venhau panyaya yangu nezuro matauriro pana ITMO uye mitsara iri bitcoin. Ndinoda kujekesa nzvimbo yangu pamusoro nyaya iyi.
1. Panguva hurukuro, Ini yakashuma maonero angu. Chokwadi kuti bitcoin iri chaizvoizvo kuwedzera rechiuto haasi dzidziso, asi ndeimwe fungidzira neshanduro kuti ane kodzero yekurarama, kana chete nokuti zvakavakirwa kwete chete pane zvakanaka nezvaanoziva, asi chiri akatsinhira vanachiremba vakawanda pasango infobase vakachengeteka. Asi handisi kunetseka pamusoro ichi, asi sei kududzira mashoko angu, kurasikirwa navo chaizvo zvinorehwa.
2. Vose avo vanokumbira kwandiri nhasi vanofarira vane kukura ndiko. Ndine chokwadi kuti izvi haisi nyaya inonyanya kukosha. Semuyenzaniso, Indaneti pakutanga kugadzirwa US vemauto pasi zvinangwa zvavo pachavo uye zvinangwa. Uye chete gare gare zvakanzi rokusimudzira zvokutengeserana, uye nhasi nyika yose anoshandisa Indaneti uye mabasa anoritsanangura. Panguva imwe, Internet kwakaunza vazhinji nokutyisidzira, yatiri kuedza zvakaoma chenesa.
3. Now panyaya bitcoin. Vaevhangeri ruzivo urwu kutaura ose zuva sei zvakasimba nzira bitcoin ari kukura uye sei nokukurumidza inogona yemwoyo pamusoro payo. I funga bitcoin, sezvinoita mamwe Michina, kubva pfungwa nemaonero kuchengeteka kushandiswa kwayo munyika. Kana iwe enzanisa bitcoin pamwe neimwe mari, semuyenzaniso, mari, ipapo vari vatatu misiyano pachena.
munhu. Hakuna kudzora mufambiro vachibhadhara kana kwema. Bitcoin anogona kubhadhara (uye mari) wairambidza mabasa, zvakadai zvinodhaka kana chipfambi, pedophilia kana kuponda. Uye ichi hainei nokudzorwa.
b. Bitcoin haritorwi kudzora kana mutemo. Hazvina anodzivirirwa chero nzira. Kana crypto-chikwama ari kubiwa, Saka apo kumhanya? At ani kutsvaka kudzivirirwa?
C. Mari bitcoin iri zvachose dzokufungidzira uye afanane mari mapiramidhi. Chokwadi, wokupedzisira donhwe mutengo bitcoin akatotanga akaita somumvuri mokutya pakati nevaya vanofungidzira.
Nechikonzero ichi, Handizivi funga bitcoin ane ngozi michina nezvezvipfuwo kushandiswa. I cherechedza kuti mashoko aya hairevi mabikirwo ichivharira, pamusoro pacho yakavakirwa. kazhinji tinofanira kunyatsotarisa ruzivo zvose zvakadaro, ongorora nengozi uye kutyisidzira vasati nekuvasuma kupinda upfumi chaihwo.
Previous Post:Coin chisanganiso
Next Post:Blockchain News 20 Ndira 2018